कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्थेमुनि सोमबार माघ ७ गतेको राशिफल : बोलो श्री स्वस्थानी भगवान कि जय – Satya Samachar
परदेशमा दुखद आत्महत्या : अघिल्लो बेलुकी श्रीमानसँग कुरा गरेकी दीलमायालाई भोलिपल्ट विहानै पतिको मृत्युको खबर : बुढी आमाले कसरी मन थाम्नु ? ( पूरा हेरि शेयर गरौ )
कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय खोल्न जाँदा देखिन् यस्तो, को हो बारम्बार यस्तो गर्ने ? (भिडियो)
हेमन्तप्रकाश वलीबाट बिप्लप माओवादी को महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद
घुस लिन खाता नम्बर दिएपछि डोटीका शिक्षा विकास प्रमुखलाई नेविसंघले लगायो कालो मोसो !
सिता दाहालको स्वास्थ्यमा सुधार, प्रचण्ड खुशी
६० वर्षीय सूर्यदेवले आफैलाइ आगो लगाए
बुटवलमा नै अब कार उत्पादन , पहिलो वर्षमा पाँच हजार बढी कार उत्पादन हुने
Home/ राशिफल/कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्थेमुनि सोमबार माघ ७ गतेको राशिफल : बोलो श्री स्वस्थानी भगवान कि जय
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्थेमुनि सोमबार माघ ७ गतेको राशिफल : बोलो श्री स्वस्थानी भगवान कि जय
मेषः चु,चे,चो,ला,लि,लु,ले,लो,अ आजको दिन शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । मान प्रतिष्ठामा बृद्धि होला । प्रेम सम्बन्ध कसिलो हुनेछ । मिष्ठान्न भोजनको अवसर प्राप्त हुने योग छ । सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्ने छ । आफन्तसँग समधुर सवन्ध हुने छ । भने स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आउने देखिन्छ । अध्यानमा मन जाने छ ।
वृषः इ,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो वृष रासि हने मित्रलाई आजको दिन कुटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्नेछ । नयाँ व्यक्तिसंग भेट होला । कुटुम्बको सहयोग मिल्नेछ । श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । निर्णय लिन गाह्रो पर्नेछ । प्रेममा बाधा हुने छ । घरझगडा पर्ने छ । प्रेममा बाधा आउने छ । चोटपटक लाग्न सक्छ ।
मिथुनः का,कि,कु,घ,ङ,छ,के,को,हा आजको दिनमा प्रियजनको सहयोग मिल्ने छ । शत्रुपरास्त हुने छन । कानुनि झमेला आजबाट समास्त हुने छ । भने स्वास्थ्यमा समस्या आउने छ । व्यवसायमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ । वैदेशिक क्षेत्र कमजोर रहला । दिनको उत्तरार्धमा धन खर्च हुनेछ । मनमा दोधारको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।
कर्कटः हि,हु,हे,हो,डा,डि,डु,डे,डो कर्कट राशिहरूको आजको दिनमा नयाँ वस्त्र तथा अलंकारको प्राप्ति हुनेछ । स्वादिष्ट भोजन पाईनेछ । कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ । ठुला व्यक्ति प्रभावित हुनेछन । शेक्षिक व्यवसायको व्यवसायबाट फाइदा हुनेछन । धन आर्जन गर्न आजको दिन सकिने छ ।
सिंहः मा,मि,मु,मे,मो,टा,टि,टु,टे सिंह राशि हुने मित्रहरूको आज आदर्श ब्यक्तित्व सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभब मिल्नेछ । महिला वर्ग बाट सहयोग मिल्नेछ । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । नचिताएको काम बन्नाले मन खुसि हुने छ । शत्रु परास्त हुने छन । प्रेममा सफल्ता मिल्ने छ ।
कन्याः टो,पा,पि,पु,ष,ण,ठ,पे,पो आजको दिनमा अचल सम्पत्ती हात पर्ने योगछ । नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । प्रेममा सफल्ता पाइने छ । शैक्षिक यात्राको अवसर मिल्ने छ । निर्णय लिने क्षमता बढ्ने छ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने छ । धन खर्च हुनेछ ।
तुलाः रा,रि,रू,रे,रो,ता,ति,तु,ते तुला राशि हुने मित्र हरूको आजको दिनमा घर व्यवहारको समस्याले सताउला । व्यवसायमा मन्दी आउला । व्यवसाय वा पेसामा परिवर्तनको धारणा पलाउन सक्छ । गलत निर्णय लिनपुगिएला । भने अध्यानमा बाधा आउने छ । शत्रुले काममा अवरोध हाल्ने छन । मानसिक चिन्ता बढ्ने छ । स्वास्थ्य खराबि आउने छ ।
वृश्विकः तो,ना,नि,नु,ने,नो,या,यि,यु आजको दिनमा नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ । धनार्जनका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्नेछन् । नजिकको व्यक्ति बाट सहयोग मिल्नेछ । आत्मबल बढ्नेछ । अधुराकामहरू पुरा हुनेछन । नयाँ कार्यको थालनि हुनेछ । आर्थिक लाभ मिल्ने छ । धार्मिक यात्राको अवसर छ । प्रेममा सफल्ता पाइने छ ।
धनुः ये,यो,भा,भि,भु,धा,फा,ढा,भे आजको दिनमा लगनशीलताले कामहरु अगाडी बढ्नेछन । मनोरञ्जनमा सहभागीता भइएला । शिक्षामा सफलता मिल्नेछ । व्यवसायिक क्षेत्र लाभप्रद रहनेछ । दामपत्य जिवनमा सफल्ता मिल्ने छ । प्रेममा समझदारी बढ्ने छ । पदोन्नतिको सम्भावना छ । यात्राको अवसर मिल्ने छ ।
मकरः भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि मकर राशि हुने मित्रको आज दिनमा कार्य क्षेत्रमा सफलता पाईनेछ । नयाँ काम वा रोजगारको अवसर मिल्नेछ । आजको दिन हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय हो । आम्दानीका नयाँ स्रोत पत्ता लाग्ने छन । आफन्तले तपाईलाई भरपुर सहयोग दिनेछन । प्रेममा समधुरता आउने छ । अध्यानमा मन जाने छ ।
कुम्भः गु,गे,गो,सा,सि,सु,से,सो,दा, आज प्रेमिकाका बिच खिन्नता बढ्नेछ । सरकारी निकाएको भय रहला । परिवारको समस्याले सताउनेछ । सामान हराउन सक्नेछ । बोलिको आलोचना हुनेछ । सञ्चित धनको हानि हुनसक्छ । अध्यानमा आज तपाईको मन जानेछैन । आफन्तले असहयोग गर्ने छन ।
मिनः दि,दु,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,चि आज राज्य बाट सम्मान पाइनेछ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ । कानुनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । आज बहुमूल्य सामान पाइएला । अध्यानमा रूचि बढ्ने छ । मनमा आनन्दता छाउने छ । आज तपाईको प्रशंसा हुने छ । आजको दिन तपाईको शुभ रहोस् राशिफलमा जे-जस्तो लेखिएतापनि कर्म गर्नुहोस सफल्ता पक्कै हात पर्ने छ ।
अरबमा महिला कामदारलाई यौन दुर्ब्यबहार गर्दै घर मालिक …जनचेतनाको लागि शेयर गरौ
भरतपुर महानगरपालिकामा यति मतान्तरले रेणु दाहालले जित्ने…
विदेशमन्त्री स्वराजले पठाएको शन्देश बोकेर ओलिको निवास पुगे राजदुत …यस्तो रहेछ ओलीलाइ सुश्मा सोराजको ओलिसँग ईछ्या हेर्नुहोस्
भाइका छोराले खुकुरी हानेर मारे दाईका २ छोरा, जग्गाको विषयमा भएको थियो झगडा